Farta gacanta lagu qoro: taariikhda, noocyada iyo isticmaalka | Hal -abuureyaasha Online
Farta gacanta lagu qoray
Nerea Morcillo | 05/10/2021 11:47 | Fuentes, Khayraadka
Waqtigan xaadirka ah, waxaan helnaa calaamado aan dhammaad lahayn, ha ahaadeen dukaamada, maqaayadaha, kafateeriyada, iwm. Calaamad kasta waxaa loo qaabeeyey si ka duwan waxayna waafaqsan tahay qiyamka ay shirkadu matasho. Naqshadani waxay ka soo jeeddaa waxa aan ugu yeerno "fonts".
Nooc -qorista waxaa lagu qeexaa farsamada ama naqshadeynta noocyada (xarfaha). Nidaamkan waxaa loo sameeyay daabacaad dambe waxaanan dhihi karnaa waa mid ka mid ah dhinacyada naqshadeynta garaafka. Laakiin, Miyaad maqashay far gacanta lagu qoray ama farta lagu qoro? Qoraalkan, waxaan ku sharxi doonaa waxa ay yihiin iyo waxa lagu garto qoyskan farta badan.
1 La kulan qoyska farta noocaan ah
2 Xoogaa macnaha taariikhiga ah
3 Soo bixitaanka naqshadda Gothen ee Gutenberg
3.1 Noocyada ugu caansan ee gothic
3.1.1 Qoraalkii Hore ee Ingiriiska
3.1.2 San Marco
3.1.3 Wilhem Klingsby Gotisch
4 Laga soo bilaabo qaabka Gothic ilaa qaabka Roomaanka
4.1 Ilaha ugu muhiimsan ee Roomaanka
5 Marka loo eego shakhsiyaddaada iyo isticmaalkeeda
6 Farta gacanta lagu qoray iyo kala duwanaanshahooda
6.3 Rasmi ah iyo Semi - rasmi ah
7 Waa maxay sababta farta gacanta lagu qoro ay tahay doorasho wanaagsan?
La kulan qoyska farta noocaan ah
Taariikhda oo dhan, naqshadeynta ayaa nolosheena ku soo gashay si ay u gaartay buugaagteena, maqaalladeenna oo xitaa gaartay qoraalladii ugu da'da weynaa. Laakiin sideen u qeexi karnaa erayga "farta gacanta lagu qoray"? The farta farta gacanta lagu qoray ama farta la magac baxay, ayaa magaceeda lagu helaa in ay tahay makiinado lagu qoray gacantaSababtan awgeed, badankoodu waxay u egyihiin kuwo la mid ah kuwa wax laga qoro ama kuwa loo yaqaan 'calligraphic' waxayna qayb ka yihiin waxa aan ugu yeerno qoysaska farta.
Qoysaska farta Waxaa lagu qeexay inay yihiin koox koox jilayaal / nooc ah oo ku salaysan xaraf isku mid ah laakiin soo bandhiga kala duwanaanshoKala duwanaanshahan waxaa lagu arki karaa iyagoo ku matala ballaadhkooda ama dhumucdooda, laakiin waxay had iyo jeer ilaaliyaan sifooyin isku mid ah.
Maqaalka oo dhan, waxaan ku tusi doonaa in qaab -dhismeedkani ma aha mid maanta ka yimid laakiin, waqti -dhaafku, wuu is -beddelay oo dabeecad -xumadeeduna sidoo kale way samaysay. Marka xigta waxaan ku siin doonaa maroojin taariikhi ah boostada waxaadna ogaan doontaa sababta ay u soo bandhigto shaqsiyad aad u sareysa.
Xoogaa macnaha taariikhiga ah
Xigasho: Lightfield Studios
Kahor intaanan bilaabin inaan nafteena u soo bandhigno asalka qoyska noocan ah, waa inaan ogaano in nooca farta aan ku naqaanno, waxaa suurto geliyey hindisaha madbacadda iyo naqshadihii ugu horreeyay waxaa la soo saaray waqti hore sidaan u malaynayno. Qaar badan oo ka mid ah xarfaha serif -ka ee aan maanta adeegsanno waxay ka soo baxaan, tusaale ahaan, xarfaha Roomaanka ee qadiimka ah sida Times New Roman oo caan ah.
Soo bixitaanka naqshadda Gothen ee Gutenberg
Qiyaastii qarnigii XNUMX -aad, far -gacmeedyada far -gacmeedku waxay ahaayeen waddo iyo horumarin ku habboon fanka Yurub. Dad badan, oo ay ka mid yihiin suufiyadu, ayaa hore u qori jiray qoraal gacmeedyo ay naqshadeeyeen xarfaha la qurxiyey. Qoraalkan ay suufiyadu ku dhaqmi jireen ayaa hadda loo yaqaan Gothic calligraphy.
Hal -abuurkii madbacadda ka dib, Johannes Gutenberg wuxuu abuuray nooc mashiin ah oo suurtogeliyay in la daabaco tiro aad u badan oo aan hadda ugu yeerno dhinto iyo xaashiyo khad. Hal -abuurahan, marka lagu daro abuuritaanka mishiin oggolaaday horumarinta qorista, wuxuu kaloo naqshadeeyay nooca ugu horreeya ee xarafka: Blackletter / Gothic. Waad ku mahadsan tahay curinta Gutenberg, naqshadaha farta ayaa diyaar u ahaa dad aad u tiro badan, maadaama ay oggolaatay taranka degdegga ah iyo daabacaadda liisaska ama buug -yaraha, kuwaas oo durba bilaabay inay qayb ka noqdaan naqshadeynta tifaftirka sidoo kale.
Noocyada ugu caansan ee gothic
Qoraalkii Hore ee Ingiriiska
Waxaa lagu hormariyay England waana mid aad caan ugu ah dhismaha xariiqyadeeda. Waqtigan xaadirka ah, xarafkan waxaa loo isticmaalaa labadaba iyon breweries, filimada ficilka, calaamadaha gaadiidka dadweynaha, iyo naqshadaha tattoo.
Farta noocaan ah waxay caan ku noqotay qaabkeeda wareegsan iyo yeelashada naqshad aad u badan oo toosan. Qaabkeeda waxaa sabab u ah saamaynta weyn ee uu ku leeyahay dhaqanka Roomaanka, gaar ahaan Talyaaniga iyo Spain. Badanaa waxaa loo adeegsadaa dhacdooyinka diimeed, sababtuna waa muuqaalkeeda oo diirran. Waqtigan xaadirka ah, wuxuu ku matalayaa labadaba kaararka salaanta, makhaayadaha cuntada, pizzerias -ka caadiga ah iyo buugaagta carruurta.
Wilhem Klingsby Gotisch
Qaab -dhismeedkaan gaarka ah waxaa naqshadeeyay Rudolph Koch. Nooca farta waxaa lagu gartaa dhammaystirkiisa khafiifka ah iyo inuu ka kooban yahay khadad adag oo toosan. Hadda, waxay noqotay mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan naqshadeynta ganacsiga.
Laga soo bilaabo qaabka Gothic ilaa qaabka Roomaanka
Noocyada Roomaanku waxay ahaayeen far -gacmeedyo farta lagu qoro tan iyo markii naqshadoodii lagu xardhay gacan iyo dhagxaan marmar ah. Hababka Roomaanku waxay caan noqdeen qiyaastii qarnigii 1470aad iyo XNUMXaad. Sannadkii XNUMX -kii magaalada Venice, naqshadeeye magaciisu ahaa Nicolas Jenson, ayaa casriyeeyay qaabkii Roomaanka oo abuuray waxa uu ahaa qaabkii waqtigaas la isticmaalay iyo kan hadda helaya magaca Qaabkii Hore. Naqshadeedu waxay ka koobnayd isbarbar -dhigga khadadka waaweyn iyo kuwa ugu fiican.
Xarfaha Roomaanka ee qadiimiga ah waxaa lagu gartaa inay yihiin xarfo leh akhrin aad u sarreeya waxayna yihiin kuwo bilicsanaanta indhaha ah. Tani waxay ka dhigtay inay noqoto qaabka ugu badan ee la adeegsado uguna muhiimsan waqtiga.
Ilaha ugu muhiimsan ee Roomaanka
Farta farta Garamond waa midda ugu weyn uguna caansan farta Roomaanka. Waxaa loogu talagalay qarnigii XNUMXaad Claude Garamond oo Faransiis ah. Waxaa loo tixgeliyaa font serif la akhrin karo oo ku habboon adeegsiga codsiyada daabacaadda. Aad bay u bey'adeed tahay maadaama khadku si dhib yar u lumay oo aan hadda ka heli karno joornaalada, buugaagta ama mareegaha.
Waxaa lagu gartaa dhererka kor -u -kacayaashiisa iyo farcankiisa, isha xarafka P, iyo xuruufta xuruufta, xuruufta waaweyni way ka liidataa xarfaha yaryar.
Nooca Minion -ka, wuxuu la wadaagaa qaab la mid ah noocyadii hore ee Renaissance. Waxaa loogu talagalay 1990 -kii Robert Slimbach. Waxaa si gaar ah loogu talagalay Adobe iyo waxaa lagu gartaa quruxdeeda, xarragodeeda iyo akhriskeeda oo aad u sareysa.
Codsiyadiisa waxaa ka mid ah in loogu talagalay qoraalka, inkasta oo sidoo kale si dijital ah loogu habeeyay. Waxay hadda ku jirtaa buugaag, majallado ama maqaallo.
Farta fartaani waxay ka soo bilaabatay 1945. Madbacadda Venice oo mulkiilaheedu ku qoran yahay magaca Aldus Manutius, ayaa isticmaashay farta noocaan, oo uu hore u naqshadeeyay Francesco Griffo, si uu u daabaco shaqo suugaaneed la yiraahdo "De Aetna." Waxa lagu garto farta noocaan ah ayaa ah inay tahay midda ugu faca weyn oo ay weheliso Garamond.
Sanadkii 1929 -kii, shirkadda Monotype Corporation, waxay Bembo u adeegsatay qaab -dhismeed loogu talagalay mashruuca Stanley Morison, kaasoo sannado ka dib heli doona magaca Bembo. Ka dib markii waxoogaa isbeddel ah lagu sameeyay naqshadihiisii, Bembo, in kasta oo ay ahayd qaab -dhismeedkii hore ama qaabkii hore, qayb ka mid ah salka waa font la akhrin karo sababtuna waa qaababkiisa shaqaynaya, iyo quruxdiisa iyo qaabkeeda caadiga ah ayaa ka dhigaysa mid ku habboon adeegsi aan xad lahayn.
Marka loo eego shakhsiyaddaada iyo isticmaalkeeda
Xigasho: Frogx Three
Markaan naqshadaynno farta makiinadda ama fulinno mashruuc xaraf, waa muhiim in la ogaado waxa aan rabno inaan ku gudbinno ilahayaga iyo waxa aan adeegsanno waxaan siin karnaa dadka kale si ay u aqoonsadaan.
Farta gacanta lagu qoro ayaa had iyo jeer lagu gartaa gudbinta a dabeecad halis ah iyo joogitaan xarrago leh oo ay weheliso shakhsiyad aad u hal -abuur leh. Waqtigan xaadirka ah, inta badan nashqadeeyayaasha garaafku waxay adeegsadaan qaab -qoraalkaan si ay u naqshadeeyaan aqoonsiyada ku habboon qiyamka aan kor ku soo sheegnay oo sidan ku qancinaya dhagaystayaasha la beegsanayo.
Oo hadda oo aan bilownay inaan ka hadalno aqoonsiga, hubaal waxaad aragtay astaamo aan dhammaad lahayn mana aadan garanayn waxa ay yihiin farta qoyskoodu iyo wax walba, waxa ay rabeen inay gudbiyaan. Waxaan ku tusi doonnaa tusaalooyin dhowr summadood oo la aqoonsan yahay oo adduunka oo dhan ah halkaasoo ay u adeegsadeen xuruufta noocan ah.
Xigasho: 1000 calaamadood
Calaamadda aan ku tusinno waxaa iska leh shirkadda badarka ee dalal badan oo Mareykan ah. Taariikhdeeda oo dhan, sida aqoonsi shirkad, shirkadani waxay abuureysay dib -u -habeyn ilaa ay ka gaarto naqshadda hadda jirta.
Naqshadda aan ku tusinayno waxaa sameeyay 2012 Mickey Rossi oo soo saaray astaanta Ferris Crane. Waxaa ku jira, palette cusub oo chromatic ah iyo far -qoris aad uga casrisan kuwii hore ayaa lagu muujiyay. Farta waxaa lagu sawiray gacanta iyo hadda, nooca farta ee sida aadka ah ugu habboon naqshaddan waxaa la yiraahdaa Ballpark Weiner.
Waxa astaanta lagu garto ayaa ah in farta -qoraalka, in kasta oo gacanta lagu qoray, ay tahay mid isku dheelitiran. Waa astaan ​​si dhaqso leh loo aqoonsaday iyo midabkeeda iyo qoritaankeeda labadaba waxay muujiyaan qiyamka sida tayada, tamarta iyo kalsoonida.
Disney waa warshadaha animation -ka Mareykanka, oo uu sameeyay hal -abuuraha Walt Disney. Kaliya maahan in laga aqoonsaday adduunka oo dhan dhaqdhaqaaqyadiisii ​​iyo sawirradiisii, laakiin summaddiisu waxay astaan ​​muhiim u ahayd daawadayaashiisa iyo dhammaan warshadaha kale sannado badan.
Astaanta Disney waxay haysaa sheeko xamaasad iyo farxad leh maadaama ay astaan ​​u tahay sixirka gadaashiisa kartoonada ah. Waa mid ka mid ah sumcadaha shaqsiyeedka iyo hal -abuurka badan, maxaa yeelay astaanta astaanta leh ee firfircoon (Qoraalka Walt Disney) waxay ku salaysan tahay oo keliya warqaddii aasaasaha shirkadda.
Tilmaan-gacmeedkan gacanta lagu qoray ayaa tilmaamaya in Disney tan iyo bilowgii ay mar walba doonaysay inay u gudbiso daawadayaasheeda soo jiidasho, mala -awaal iyo adduun firfircoon.
Shirkadda Coca Cola waxay u heellan tahay soo saaridda iyo iibinta cabitaannada fudud iyo sharaabka fudud. Waxaa asalkiisu ahaa 1888 -kii farmashiye waxaana tan iyo markaas laga aqoonsaday adduunka oo dhan.
Nakhshadeeye magaciisu yahay Robinson, wuxuu ka abuuray astaan ​​u gaar ah farta farta garaafka oo ku baxaysa magaca Isbaanish, farta gacanta oo aad caan u ah qarnigii XNUMXaad. Naqshadeeyuhu kuma guulaysan oo kaliya inuu naqshadeeyo summad la shaqayn doonta badeecadda shirkadda, laakiin wuxuu kaloo ku guulaystay inuu naqshadeeyo farta farta la akhrin karo oo qof walba ku habboon, waddanka ha u eegto.
Sababtan awgeed, midabada dhalaalaya ee ay bixisay summaddu, oo ay weheliso astaanteeda, ayaa ka dhigaysa shirkadda inay ilaaliso qiimaheeda; hoggaaminta, wada -shaqaynta, daacadnimada, wax -qabadka, xiisaha, kala -duwanaanta iyo tayada.
Farta gacanta lagu qoray iyo kala duwanaanshahooda
Markaan ka hadlayno xarfaha gacanta lagu qoro, kama hadleyno oo kaliya naqshadaha gacanta lagu sameeyay, laakiin sidoo kale, waxay ku xiran tahay tilmaanta xarriiqda, dhumucdeeda iyo bilicdeeda, waxay helaan magacyo kala duwan. Font -yadaani waxay ka tirsan yihiin hal qoys waana wax xiiso leh inaan baranno si aan u ogaanno nashqadaha ku qarsoon xarfahaas.
Nooca cadaygu waa nooc ka mid ah farta dhijitaalka ah, kaas oo soo saara qaab la mid ah fartii gacanta lagu qoray laakiin leh burush. Caadi ahaan waa qaab ku habboon cinwaannada waaweyn iyada oo ay ugu wacan tahay xarriiqdeeda iyo dhinaca hal -abuurkeeda.
Xarfaha Calligraphic waxaa dhiirrigeliyay xarfaha gacanta lagu qoro maadaama muuqaalkoodu la mid yahay. Waxaa badanaa loo qaabeeyaa siyaabo kala duwan, iyadoo ku xiran muuqaalkooda, waxay noqon karaan kuwo ka dheer, wareegsan, aad u kacsan oo awood leh ama naxariis badan.
Rasmi ah iyo Semi - rasmi ah
Iyada oo ku xiran xariiqda, waxaa sidoo kale lagu sifeeyay inay yihiin kuwo rasmi ah ama kuwo aan rasmi ahayn, ereygani wuxuu tilmaamayaa baaxadda halista ah ee ay leedarku leedahay. Sidaan hore u soo aragnay, naqshadeeyayaasha qaarkood waxay u isticmaalaan ilahaan si ay u matalaan qiyamka qaar ama kuwa kale.
Waa maxay sababta farta gacanta lagu qoro ay tahay doorasho wanaagsan?
Mar kasta oo aad raadinayso nooc kasta oo ah mashaariicdaada, waxaad ka heli doontaa noocyo iyo qaybo aan dhammaad lahayn marka loo eego qoyskeeda. Laakiin wax walba ka sarreeya, mar kasta oo aad rabto inaad siiso taabasho ka sii daran oo rasmi ah, ha ka waaban inaad haysato font -ka noocan ah.
Waad ku mahadsan tahay xarfaha gacanta lagu qoray, waxaad ku guuleysan kartaa mashaariic aan dhammaad lahayn oo ay ka buuxaan shaqsiyad iyo hal -abuur. Waxa kale oo aad leedahay kumanaan bog oo aad ka soo dejisan karto xarfahan bilaash ah. Qaar ka mid ah waa: Google Fonts, Fir Squirrel, Dafont, Adobe Fonts, Font River, Fonts Urban, Space Font, Free Premium Fonts, 1001 Fonts Free, Font Freak, Font Struct, Font Zone, Typedebot ama Font Fabric.
Miyaad hore isku dayday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Farta gacanta lagu qoray
Taariikhda naqshadeynta garaafka
Sida loo sameeyo badhan HTML ah oo casri ah oo shaqeynaya